Miski Cabdinuur Salal | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cali waa nin dhalinyaro ah oo dhammeyey daraasadda Jaamcadda, waxa uu ka shaqeyaa mid kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee Dalka. Waxa uu garab siyaa waalidkii, sidoo kale waxa uu walaalihii ka bixiyaa qarashaadka waxbarshadda. Cali caawinta kaso-kow dabeecad ahaan waa mid dhaqankiisa addagyahay, amaradiisana ay kulul yihiin. Cali waxa uu iskula hadlay in uu joogo waqtigii uu guursan lahaa, waxa ay is barteen gabar dhammeysay Dugsiga sare, aad ayey ugu faraxday inay barato wiil Jaamici ah, oo shaqeysto, haggaag iyo howraarsan ayey tiri Raxmo oo ahayd gabadha ey Cali isbarteen dhawaanahaan, waxa ay qalbigeeda kula hadashay sida ay u …
BuuggaagFalsafada iyo Siyaasada Arrimaha Bulshada
Buuggaan waxaa Qoray Mufekarka caanka ee reer Jasaa’ir ee la oran jirey Maalik binu Nabi, Maalik Allah u naxariistee waxa uu waxbarashadiisa ku soo qaatay Dalka Faransiiska. Buuggaan waxa uu ka kooban yahay 160 bog. Waxaana lagu turjumay Luuqada Faransiiska 1949M waxaana turjumay Labbada mufeker ee kale ah: Cabdisabuur Shaahi Iyo Cumar Kaamil. Buuggaan waxa uu ka hadlayaa Sida Ay Bulshada ku Hormari Karta Kuna Dhisi Karto Ilbaxnimadeeda. waxa uu ku qoran yahay Luuqadda Carabiga oo fasiix ah, waxaan jeclaan lahaa qof waliba oo luuqadda Carabiga yaqaan in uu aqriyo, waa buugg aadan ka caajiseyn aqrintiisa sida uu u qoran …
Hooyada inta ay Uurka leedahay waxaa ku imaado isbadallo badan taasoo keenta Hooyada inay cunno fiican qaaddan weydo. Inkastoo Hooyada cuno xumo lagu arki karo xilliga Uurka haddana waxaa muhiim ah in aan siinno cunno dheelitiran. Waxaa Hooyada lagula taliyaa cunnoyinka in ay qaaddato haddab inta ay awoodo ayada oo waliba ku noq-noqaneyso, maadama canugga caloosha ku jiri uu koraayo Hooyada waxay u bbaahan tahay nafaqo ka badan xadigi ay horey u qaaddan jirtay. Waxaa jiro cunooyin aan Hooyada loo ogaleyn in ay qaaddato xilliga Uurka. Haddii aan horey u maqali jirney daawoyinka qaar looma ogalo Hooyada xilliga ay Uurka …
Miski Cabdinuur Salal, July 22, 2020
Inta badan Ardayda marka ay dhammeyaan daarsadaha Jaamacadda waxa ay sameyaan cilmi baaris. Cilmi baristu waa in la raadiyo dhibaato taagan xalkeeda taas oo si sax ah aan loo ooggeyn cilmi barista ka hor. Haddaba sidee ayaan ku dooran karnaa cinwaanka aan cilmi baarista ku sameyneyno. Marka Hore Inta Aanan Dooran Cinwaan Waxaa Inoo Muhiim Ah In Aan Ogaano: Cinwaanka aan dooraneynno shaqsi ahaan in aan jecelnahay taasina waxa ay naga caawineysaa in aanan ku caajisin Aqrinta cilmi baarisyaddii naga horeyeey ee xiriirka la leh cinwaankeena iyo diyaarintiisaba. Sidoo kale waxaa muhiim ah in cinwaankeena uu noqdo dhibaato taagan oo …
Wadnaha Waa Keydiyaha Xasuusta Iyo Xifdinta
Miski Cabdinuur Salal, July 14, 2020
Waxa aan wada ognahay in uu Wadnaha yahay xubin muhiim u ah jirka,Qaab dhismeed ahaan waxaa uu ku yaalla saableyda hoosteeda. Sida ay Wajiyadda dadka u kale duwan yihiin ayuu Wadna waliba uga gadisan yahay Wadnaha kale, waxaana lagu tilmmaamaa in uu la’ eg yahay qof waliba gacantiisa marka uu laabbo cummaacumtiisa. Waxa uu dhammaan jirka si siman u gaarsiiyaa wareegga dhiiga, waxaana la shaqeyo halboowlayaal iyo xidada jirka isku xira. Wadnaha shaqadiisa intaas waa ay ka badan tahay oo waxaa aan rabnaa in aan maantay isla falaqeynno shaqooyinka cajiibka ah ee uu Wadnaheenna qabto, taaso aanba inta badan aan …
Rasuul waliba oo uu Allah ka doorto dadkiisa waxaa uu siiyey mucjisooyin waaweyn si ay dadka ugu waano qaataan jiritaanka Allah,cibdooyinka ay ugu Kali yeellaan Allaha koonka abuuray kaligiii. Nimcada ugu weyn ee uu addoomada Allaah siiyo waa Nimcad diinta iyo garshada Rabigii abuuray. Subanaheenna NNKH waxaa la siiyey mucjisooyin badan oo caddeynaayo Nabinimadiisa . Aqriste kaallay aan isla oggaane mucjisooyinka la siiyey suubanaheenna. Mucjiooyinka Suubanaheenna Uu Allaah Siiyey Aad Ayey U Badan Yihiin Waxa Aana Kamid Ah: 1-Qur’aanka, Qur’aanku waxa uu kamid yahay mucjiooyinka uu Allah siiyey Subanheenna NNKH, Bulshadii uu Suubanheenna ka dhashay oo lagu yaqaanay ku xeel …
Madax-Addeygii Rer Banii Israa’iil Iyo Xujooyinka Caddaa Ee uu Alle Siiyey.
Caruurta inta badan waxa ay soo maraan marxaladdo kale duwan, marba marka ka danbeyso canugga waa uu koraa oo waxaa is badal ku imaado muuqaalkiisa, sidoo kale waxaa kobco caqligiisa. Isbadaladaas waxa ay ku keenta cannugga in ay ku soo kordhaan dabeecado badan oon uusan horay u lahaan jirin, sida in uu madax-adeeg lasoo baxo, ama qalafsanaan, Badanaa caruurta waxaa lagu arkaa marka ay da’dooda gaarto inta u dhaxayso 12-19 Sanno. Xiligaan waxa ay maraan marxaladd aad u addag waxa ay kasoo gudbaan ilmanimada ayagoo noqdo Wiil ama Gabar weyn. Marxaldaan waa marxada uu ilmaha lasoo baxo Madax-adeeg,Xanaq badan, intabadan …
Qanjirda waa xubin soo daayo dheecanno jirka muhiim u ah, waxa ayna leeyihiin hab-dhis dhan oo loo yaqaano Hab-dhiska Qanjirada.Waxaa loo qeybiyaa qanjirada labo qeybood oo kale ah: Qanjirada sida tooska ah u sameeyo hormoonnada kun daro wareegga dhiigga noocaan waxaa Afka qalaad loo yaqanaa “Endocrine Glands” Noocaa labbaad waaa qanjirada sameeyo dhididka waxaana Afka qalaad lagu dhahaa “ Exocrine Glands”. Haddaba Maxay Qanjirada Jirka U Qabtaan? Qanjirada waxa ay soo daayaan hormoono maamula shucuurta qofka sida Xanaaqa, Farxadda, Murugada IWM. Qanjirada waxa ay ka qeyb qaata koritaanka maskaxda iyo kuritaanka jirka. Waxa ay soo daayaan hormoono la sheeqaan Hab-dhiska …